Taliska qeybta 27aad oo ka hadlay dagaalkii ka dhacay Kaaraan iskana fogeeyay - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Taliska qeybta 27aad oo ka hadlay dagaalkii ka dhacay Kaaraan iskana fogeeyay
Taliska qeybta 27aad oo ka hadlay dagaalkii ka dhacay Kaaraan iskana fogeeyay
Taliyaha Qeybta 27-aad ee Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Janeral Axmed Maxamed Calasow (Tareedisho) sheegay in dagaalkii ka dhacay Muqdisho aysan wax lug ah ku laheen Ciidanka Qeybta 27aad lagana been abuurtay.
Shir jara’id oo uu Warbaahinta u qabtay ayuu sheegay in Ciidanka qeybta 27aad aysan ka Shaqeyn magalada Muqdisho , balse ay yihiin kuwo ka howlgalla Gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii Maamulka degmada Kaaraan ay ku eedeeyeen in dagaalkii ka dhacay Kaaraan ay ka qeyb qaateen Ciidamo katirsan qeybta 27aad.
Waxaa uu sicad u sheegay inay jiraan rag hubeysan oo wata Gaadiidka & dharka Ciidamada Millateriga, kuwaas oo uu sheegay inay dhibaato ku hayaan Shacabka Muqdisho & degaannada u xeeran.
Taliyaha Qeybta 27-aad ee Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Janeral Axmed Maxamed Calasow (Tareedisho) oo sii hadlayay ayaa waxaa uu sheegay in Cidianka qeybta 27aad ay haatan howlgal ka dhan ah Al-Shabaab ka wadaan degaanka Xaaji Cali iyo degaannada ku dhow dhow.
Ugu dambeyn Taliye Tareedisho ayaa waxaa uu ugu baaqay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir in Magaalada Muqdisho uu ka saaro Ciidamada Gadiidka & hubka ku dehx-wata Magaalada Muqdisho, kuwaas oo uu sheegay inay ka tirsaneyn Ciidanka dowladda.
Laba maalin ka hor dayaa duleedka degmada Kaaraan & Gobolka Banaadir waxaa ku dagaalamay Ciidamo ka wada tirsan Millateriga Soomaaliya, kuwaas oo kala taageersan Taliyaha Guutada Afaraad Korneyl Saneey Cabdulle & Ismaaciil Xaadoole oo kamid ah Saraakiisha Ciidamada Millateriga Soomaaliya.
Previous articleKhilaaf ka dhex billowday Maamulka Tv-ga Dowladda & Madaxtooyada Somalia
Next articleDowladda Ingiriiska oo kamid noqoneysa saamileyda dekadda Berbera